Ganacsatada DP World oo Muqdisho u tegay inay la wareegaan Dekadda ?
Saxaafadu Malahan Saaxiib Joogtaa Waagacusub Media 2012 Ganacsatada DP World oo Muqdisho u tegay inay la wareegaan Dekadda ?
12 December 2012 Waagacusub.com- Ganacsato Dalaaliina iyo Masuuliyiin ka socda Shirkadda DP World Portal ee fadhigeedu yahay Dalka Isu taga Emirate-ka Carabta ayaa todobaadkii hore booqday Dekadda weyn ee Muqdisho,sida ay Waagacusub u xaqiijiyeen ila wareedyo muhiima. Dalaaliin uu ka mid yahay Gudoomiyaha Ganacsatada Somalida ee Emirate-ka Carabta Shariif Ahmed ayaa xusul duub ugu jira sidii Maamulka Dekadda Muqdisho loogu wareejin lahaa Shirkadda DP World Portal oo ka hoowlgasha Dekado waaweyn sida Emirate-ka ,Jibouti iyo Gobolo ku yaal Mareykanka.
Ganacsatada Somalida iyo hoowlwadeenada DP World waxay kulan albaabada u xiran la yeesheen Madaxweyne Hassan Alasow ,Ra''isulwasare Saacid iyo Wasiirka Dekadaha hasse yeeshee lama oga in wada hadalkooda is faham ku dhamaaday iyo in la isku mari waayay.
Qaar ka mida Ganacsatada Somalida ayaa Gudoomiye Shariif Ahmed ku dhaliilay inuu Shirkad ajnabiya la rabo Mashruuc ay ka faa''iideeysan karaan Ganacsatada Soomaaliyeed.
Shirkadda DP World inkastoo Maalqabeeno u dhashay Emirate-ka leeyihiin saamiga ugu badan hadana waxaa Saami ku leh Ganacsade Abdirahman Boreh oo ka mida Maalqabeenada waaweyn ee Jibouti ,waloow uu dalkaas dibad meer ka noqday kadib markii Xukun siyaasadeed Xukumadda Geelle ku riday.
Dhaqaalayahanada Somalida ayaa ku kala aragti duwan waxa ka dhalan kara hadii Shirkadda DP World lagu wareejiyo Dekadda Muqdisho.
Xeeldheerayaasha qaar waxay qabaan inay fursad qaaliya tahay in dekadda lagu wareejiyo DP World Portal halka dadka qaarna waxaan la qaadan karin ku tilmaameen in ilaha dhaqaalaha dalka loo gacan geliyo Shirkado ajnabi .
Garoonka Diyaaradaha Muqdisho waxaa maamula Shirkad Ajnabiya oo lagu magacaabo SKA taas oo horumar lixaadleh ku sameeysay qeybaha kala duwan ee Garoonka sida Qalabka Kontoroolka,dhismaha iyo Gaadiidka .
Topnews:-Madaxweyne Gargurte oo Somaliland u ogoladay daakhiliyad 10 sano Waagacusub is Investigative media with sense of professionalism, fearless in cultivating the truth, informative, unbiased, independent, educative, a role model and a voice to the voiceless.
Waagacusub Media The Largest Media in Somalia
Xasuusta USC 1
Xasuusta USC 2
Xasuusta USC 3
Xasuusta USC 4
Xasuusta USC 5
Dikaan Jaceyl 1
Dikaan Jaceyl 2
Dikaan Jaceyl 3
Dikaan Jaceyl 4
Dikaan Jaceyl 5
Dikaan Jaceyl 6
Dikaan Jaceyl 7
Dikaan Jaceyl 8
Dikaan Jaceyl 9 Dikaan Jaceyl 10
Dikaan Jaceyl 11
Hees Dhiigshiil Raadraaca Fanka 1 Hibo Nuura maxaad ka taqaan
Raadraaca Fanka 2 Samatar maxaad ka taqaan Dhageyso Raadraaca Fanka 3 Saado Cali waa tuma Dhageyso
Raadraaca Fanka 4 Xasuustii Kooxda Heegan Dhageyso
Fanka 5 Jiir Dhageyso
Fanka 6 Baarleex Dhageyso
Gabay Kaariye 1
Gabay Bacadle 1
Gabay Yamyam 1
Sunday Music 1
Sunday Music 2
Xuska M X Cigaal dhageyso wareys
Hees l Xaayoow
Xasuus Riwayad Hees Xildhiban Al-Shabaab Part1 Dhageyso
Al-Shabaab Part2 Dhageyso
Al-Shabaab Part3 Dhageyso
Al-Shabaab Part4 Dhageyso
Al-Shabaab Part5 Dhageyso
Al-Shabaab Part6 Dhageyso
Qabyalada PM Gaas 1
Qabyalada PM Gaas 2
Qabyalada PM Gaas 3